को बन्दैछन् विद्यार्थी फ्रन्टका अध्यक्ष ? | सहारा टाइम्स
Home » Main-News » को बन्दैछन् विद्यार्थी फ्रन्टका अध्यक्ष ?
को बन्दैछन् विद्यार्थी फ्रन्टका अध्यक्ष ?
काठमाडौ बैशाख ११ गते । तराई मधेश विद्यार्थी फ्रन्टको महाधिवेशन बैशाख २९, ३०, र ३१ गते बाराको कलैयामा हुने भएको छ त्यसअघि फ्रन्टको अध्यक्ष को बन्ने विषयमा प्रचारवाजी शुरु भएको छ ।
फ्रन्टका विद्यार्थी नेताहरुले आआफ्नो तरिकाबाट अध्यक्षको तयारीमा लागेका छन् । जति जति नजिकिदैछ त्यति नै फ्रन्टभित्रको माहोल तातिदैछन् ।
फ्रन्टका विद्यार्थी नेताहरुले आआफ्नो तरिकाले अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा शुरु गरेको छ । त्यसमध्ये सबभन्दा अग्रभागमा फ्रन्टका महासचिव मनिष मिश्रा देखिनु भएको छ । त्यस्तै उपाध्यक्ष शम्भु झा, उपाध्यक्ष रोशनराज चौधरी, त्यसपछि केन्द्रीय सचिवालय सदस्य आलोक सिंह, अजय झा पनि अध्यक्षका दावेदार हुनुहुन्छ ।
सबै उम्मेदवारले संगठनमा आआफ्नो योगदानको दावी गर्दै प्रचार प्रसारमा लागेका छन् । शुरुदेखि संगठन तथा पार्टीमा लागेको, मधेश आन्दोलनमा भूमिका रहेको कुरा राख्दै आएका छन् । यी उम्मेदवारहरुले गोप्य तथा खुल्ला रुपमा भेलाहरु गर्दै आउनु भएको छ ।
आआफ्ना पक्षमा विद्यार्थीको समर्थन लिन यी विद्यार्थी नेताहरुले काठमाडौ छाडेर मधेशमा घुमिरहेका छन् । कसैले गोप्य भेला गरेका छन् भने कसैले खुल्ला भेला गरेर विद्यार्थीको मत आआफ्ना तर्फ तानिरहेका छन् । फ्रन्टका वर्तमान अध्यक्ष सुरेशकुमार मण्डलले राजनीतिकमा महत्वकाँक्षा हुनु स्वभाविक हो र लोकतन्त्रमा यसलाई राम्रो मान्नु पर्छ तर अध्यक्ष पद लगायत अन्यमा सर्वसम्मतिले चयन हुने विश्वास आफूलाई लागेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष पदका जवर्जस्त उम्मेदवार मनिष मिश्र पनि काठमाडौ छाडेको आज चार दिन भइसक्यो । उहाँ पनि मधेशका विभिन्न जिल्लाका विद्यार्थीहरुलाई भेटघाटलाई तीब्रता दिएको छ । शुरुदेखि पार्टी तथा फ्रन्टमा लागेका मनिष मिश्राले मूल राजनीतिक भन्दा पनि विद्यार्थी हकहितको लागि आफ्नो विशेष योगदान रहेको दावी गर्नुभयो ।
मधेश आन्दोलनको बेला काठमाडौदेखि जिल्लासम्म आफूले विभिन्न मोर्चाका रहेर काम गरेको कुरा दावी गर्दै उहाँले आफू अध्यक्षको उम्मेदवार भएपछि संगठन तथा पार्टीले मूल्यांकन गरि सर्वसम्मतिले अध्यक्ष बनाउने विश्वास आफूलाई लागेको बताउनुभयो ।
अर्का अध्यक्षका उम्मेदवार शम्भु झाले आफू झापा, सुनसरी, मोरगं र सप्तरीमा भेला बोलाई विद्यार्थीहरुसँग छलफल गरी सकेको बताउनुभयो । उहाँले जति ठाउँमा भेला गरे सबैले आफूलाई नै समर्थन गरेको पनि दावी गर्दै आफू शुरुदेखि नै पार्टीमा लागेको अरु त विभिन्न स्वार्थले पार्टीमा लागेका छन् तर आफू विशुद्ध रुपमा मधेश स्वार्थका लागि लागिको दावी गर्नुभयो ।
त्यस्तै आलोक सिंहले पनि आफू पार्टीको स्थापनाकालदेखि नै लागेको दावी गर्दै शिक्षाको क्षेत्रमा आफ्नो विशेष भूमिका रहेको दावी गर्नुभयो । उहाँले पोखरा विश्व विद्यालयमा आफूले नै स्ववियु स्थापना गराएको पनि दावी गर्नुभयो ।
अजय झाको पनि धारणा उस्तै उस्तै छन् । आफू अध्यक्षको दावेदार रहेको उल्लेख गर्दै सर्वसम्मतिबाट आफू अध्यक्षमा चुनिनेमा विश्वास रहेको उहाँले बताउनु भयो । पार्टीमा आफ्नो योगदानको चर्चा आफै गर्नुभन्दा पनि पार्टीका साथीहरुले त्यसको मूल्यांकन गर्ने भन्दै उहाँले आर्थिक पारदर्शिता मुख्य कुरा रहेको र त्यसमा आफू प्रतिवद्ध रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।